Michina yekutengesa iri kuzove inoitika mune ramangwana here? -Industry nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
Michina yekutengesa ichave inoitika mune ramangwana here?
Tichitarisa kubva mukugadzirwa kwemamashini ekutengesa, ivo vakaonekwa semhedzisiro yekushandurwa kwemauto-anonyanya maindasitiri chimiro kune nzanga yehunyanzvi. Yakakura-kugadzirwa uye kushandiswa uye shanduko mumashandisirwo mapatani uye nharaunda yekutengesa inoda nzira nyowani dzekuparadzira, nepo mari yevashandi yezvitoro zvetsika, zvitoro zvemadhipatimendi uye dzimwe nzira nyowani dzekuparadzira dziri kukwira, pamwe neganhuriro kubva kumasayiti, kutenga zviri nyore nezvimwe zvinhu, michina isina-kuenda yekutengesa yakave seichi chinhu chakakosha.
Panyaya yekupa michina yekutengesa inogona kuita zvakakwana kushomeka kwevashandi uye kuchinjira kune shanduko mumamiriro ekushandisa uye maitiro ekushandisa. Iine mari shoma inodiwa uye iri shoma nzvimbo yekugara, 24-awa yekuzvishandira-wega mavaneti michina inogona kuve yakawanda-kuchengetedza vashandi, inokwezva kukurudzira kuda kuziva kwekutenga uye mhinduro yakanaka kune iri kukwira yevashandi mitengo.
Vending muchina indasitiri iri kuenda kune ruzivo ruzivo uye nekuwedzera kufunga. Kuvandudzwa kwaro kwakazvipira kuchengetedza zviwanikwa zvemagetsi, zvinopa simba - zvinwiwa michina yekutengesa zvazove zvakanyanya muindasitiri, michina yekutengesa iyi inogona kuchengetedza zvinwiwa zvichitonhorera kunyangwe firiji yadzimwa, ichichengetedza magetsi e10-15% kubva kumichina yechinyakare yekutengesa. Vending michina ichave yakawanda simba-yekuchengetedza uye multifunctional yakatarisana sezvo isu tapinda iyo 21st remakore.
Kushandisa michina chinhu chisingamiswe, isu'ndichaona zvimwe zvishandiso zvine hungwaru zvichitsiva zvechivanhu basa, kungave mukugadzira, kusevha kana kutengesa, tarisiro yekutengesa indasitiri yemuchina yakajeka pasi pemamiriro aya.
Prev: Smart vending michina yakave iri inotungamira nzvimbo yeiyo post-isina kumanikidzwa yekutengesa nguva.